Otú nyefee Photos si Mac ka iPhone-enweghị adịkwa Files
Otú nyefee Photos si Mac ka iPhone enweghị iTunes
> Resource> Mac> otú nyefee Photos si Mac ka iPhone enweghị iTunes
"M chọrọ iṅomi ụfọdụ foto site na enyi m si MacBook Pro m iPhone. Otú ọ dị, a ịdọ aka ná ntị wee pụta, na-agwa m na ihe niile na m iPhone ga-ehichapu ya. Ọ bụ n'ebe ahụ n'ụzọ ọ bụla nyefee foto site Mac na iPhone enweghị ihe ọ bụla nsogbu dị ka na? "
Ọ bụrụ na ndị Mac ị na-aga nyefee foto site na abụghị Mac ị na-emekarị gakọrịta gị iPhone, mgbe ahụ, ị ga-ma-ada nke oyiri foto site na Mac ka iPhone ma ọ bụ ihichapu ihe niile na gị iPhone. Iji nyefee foto site na Mac ọ bụla iPhone kpamkpam, ị kwesịrị ị na-agbalị Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-ahapụ ị na-akpali foto site na a Mac na kọmputa na-multiple iPhones enweghị erasing ọ bụla faịlụ. N'okpuru ebe a bụ otú iji Wondershare TunesGo (Mac) iji nweta ihe mgbaru ọsọ gị na 2 nzọụkwụ.
Gbalịa Wondershare TunesGo (Mac) nyefee foto site Mac ka iPhone kpamkpam
Cheta na: Ọ bụrụ na ị nwere a Windows PC, biko gbalịa Wondershare TunesGo (Windows) ka nyefee foto site na PC na-iPhone.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone na Mac
Download na wụnye Wondershare TunesGo (Mac). Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na MacBook Pro, MacBook Air, na iMac-agba ọsọ na Mac OS X 10,8, 10.7, na 10.6. Na ọ na-akwado iPhones, gụnyere iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 4S, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4, wdg onwem na iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9 . Jikọọ gị iPhone na Mac. Mgbe TunesGo (Mac) achọpụta rụọ gị iPhone, ọ ga-egosipụta gị iPhone na-amalite window.
Nzọụkwụ 2. Nyefee foto site na Mac ka iPhone
Pịa "Photos" ke hapụrụ kọlụm ịbanye Photos window. Site n'ebe a, na n'elu nke mpio ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe na akara ngosi aha dị ka "Tinye". Pịa ya na-agagharị na gị Mac maka foto na ị chọrọ nyefee iPhone. Mgbe ahụ na ha, họrọ ha, wee pịa "Open". Mgbe ahụ ị ga-ọma-akpali foto site na Mac ka iPhone.
Na dị nnọọ a abụọ, ị pụrụ ịhụ na foto na-agafere si Mac gị iPhone. Na Wondershare TunesGo (Mac), ị nwere ike ijikwa foto ndị a na gị iPhone site na-eke foto albums na-etinye ha na. Lee, ọ bụ nnọọ mfe nyefee foto site na Mac ka iPhone enweghị iTunes, nri? Na otú a, ị ga-agaghịkwa nchegbu banyere faịlụ ọnwụ mgbe a na-edegharị foto site na Mac ka iPhone.
Na-ekiri ndị Video nyefee Photos si a Mac na iPhone enweghị iTunes
Download Wondershare TunesGo (Mac) nyefee foto site na Mac ka iPhone!
CleanMyMac - The Kasị Famous Ngwá Ọrụ ọcha Your Mac
Marcel Bresink Software-Systeme: TinkerTool maka Mac
Adobe Karaca CS6 maka Mac
-Eduzi: otú nyefee Videos si iPhone ka Mac na site na Mac ka iPhone